ALAROBIA 13 NOVAMBRA 2019
JIRAMA MORONDAVA : Nisy fitaovana famokarana herinaratra nirehitra ny alarobia maraina teo
Ny alarobia maraina tokony ho tamin’ny iray ora sy sasany tany ho any no may kila forehitra ny “groupe” iray ao amin’ny foibe famokarana herinaratra jirama Morondava . 7 février 2019
Araka ny tatitra voaray avy amin’ny tompon’andraikitra any an-toerana, omaly dia efa voafehy ara-dalàna ny afo ary tsy misy atahorana intsony, vokatry ny ezaka avy amin’ny mpamonjy voina sy ireo fokonolona. Manoloana izany indrindra dia tsy maintsy nisy aloha ny fepetra noraisina amin’ny alalan’ny fifampifandimbiasana ny jiro alefa manerana ny tanàna na “deléstage tournant”, manomnoka eto manko dia tsy ho ampy intsony ny famokarana herinaratra.
Maharitra adiny efatra ny fanapahana ny jiro ,ny maraina amin’ny valo ora hatramin’ny efatra ora hariva. Mitohy indray izany ny hariva eo anelanelan’ny enina ora hariva hatramin’ny folo ora sy sasany any ho any. Tsy maintsy hisedra olana aloha hatreto ny mponina eo anatrehan’izany fandaminana izany, eny fa na dia efa hita soritra sy manampy trotraka aza ny fijaliana amin’ny resaka herinaratra eto amintsika , saika manerana ny Madagasikara. Efa eo am-pikatsahana vahaolana hamerenana amin’ny laoniny ny famatsiana amin’izao fotoana izao ireo tompon’andraikitra ao amin’ity faritra ity.
Nirehitra ny tambohon’ ny lisea Andohalo, fiara iray kila forehitra FAHAMAIZANA (190) 7 novembre 2019 Notolorana mari-boninahitra « grand officier de l’ordre national » FAHALASAN’I DADAH RABEL (MAHALEO) (175) 8 novembre 2019 Tovolahy kely nitondra bisikileta maty voafaokan’ny fiara SAHATSIO-ANTSIRABE (108) 7 novembre 2019 Roa lahy tratra nampiasa vola sandoka, karohin’ny Polisy ALIM-PANDIHIZANA TAO SAMBAVA (108) 8 novembre 2019 Raikitra ny fifandonana, tafaverina ny omby an-jatony FANAFIHAN-DAHALO TAO AMBAHITA BEKILY (105) 8 novembre 2019 Havaozina sy harenina ny fomba fiasa eny amin’ny Fitsarana FILOHA ANDRY RAJOELINA (75) 8 novembre 2019